tamin`ny fanombohan` ny fivoriana tsy ara-potoana ny alarobia lasa teo. Niteraka resabe izany satria ireo mpanolotsaina CUA lany tamin` ny alalan`ny antoko TIM moa dia nisafidy tsy handray anjara amin`izay lahadinika izay ary nitsipka izay fanapahan-kevitra. Omaly anefa dia nifantoka tamin`ny fanangana fikambanana amin`ny sehatra fiahina ara-tsosialy ny dinika. Adihevitra ihany koa ny tambin-karama mitentina 500 00 ariary izay voalaza fa tokony ho an` ny mpanolotsaina tsirairay. Tsy ara-dalana izany hoy ny filohan`ny mpanolotsaina nefa tonga ny tetibolan` ny kaominna dia voasoratra tao ny lelavola. Mbola tsy nisy hevitra tapaka nandritra izay roa andro anantanterahina ny fivoriana tsy ara-potoana ity. Andrasana anio ny fanapahan-kevitra vaovao lany aroson` ny fiadiadin`ny tanàna.